Abakhanyisi Bombani Abakhiqizi & Abahlinzeki | China Lightning yokwanda Arrester Factory
Isibani sombani we-polymer esingu-220kV
I-220kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jikelele I-Zinc Oxide Type Surge Arrester iyisivikeli sakamuva esithuthukile esingaphezulu kwe- － voltage somugqa wokusabalalisa nedivayisi yesiteshi samandla. Ihlanganiswe ne-zinc oxide kanye nenye i-oxide yensimbi njenge-disc Resistor eyinhloko, izici ze-volt-ampere kanye namandla wamanje we-Resistor discare athuthuke kakhulu uma kuqhathaniswa ne-SiC ejwayelekile yokuboshwa. Ngaphansi kwamandla kagesi wokusebenza, i-current through the arrest arrester ivuliwe ...
Uhlobo lwesiteshi sesiteshi sokubamba sombani esingu-110kV
I-110kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jikelele I-Zinc Oxide Type Surge Arrester iyisivikeli sakamuva esithuthukisiwe ngaphezulu kwe- － voltage somugqa wokusabalalisa nedivayisi yesiteshi samandla. Ihlanganiswe ne-zinc oxide kanye nenye i-oxide yensimbi njenge-disc Resistor eyinhloko, izici ze-volt-ampere kanye namandla wamanje we-Resistor discare athuthuke kakhulu uma kuqhathaniswa ne-SiC ejwayelekile yokuboshwa. Ngaphansi kwamandla kagesi wokusebenza, i-current through the arrest arrester ivuliwe ...
Isibani sombani esingu-110kV
Uhlobo lwesiteshi sesiteshi sokuboshwa sombani esingu-66kV
I-66kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jikelele I-Zinc Oxide Type Surge Arrester iyisivikeli sakamuva esithuthukile esingaphezulu kwe- － voltage somugqa wokusabalalisa nedivayisi yesiteshi samandla. Ihlanganiswe ne-zinc oxide kanye nenye i-oxide yensimbi njenge-disc Resistor eyinhloko, izici ze-volt-ampere kanye namandla wamanje we-Resistor discare athuthuke kakhulu uma kuqhathaniswa ne-SiC ejwayelekile yokuboshwa. Ngaphansi kwamandla kagesi wokuqamba, okukhona ngokusebenzisa isiboshwa sokukhuphuka kuphela ...
Isibani sombani esingu-66kV
35kV polymer umbani umbophi
I-35kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jikelele I-Zinc Oxide Type Surge Arrester iyisivikeli sakamuva esithuthukisiwe ngaphezulu kwe- － voltage somugqa wokusabalalisa nedivayisi yesiteshi samandla. Ihlanganiswe ne-zinc oxide kanye nenye i-oxide yensimbi njenge-disc Resistor eyinhloko, izici ze-volt-ampere kanye namandla wamanje we-Resistor discare athuthuke kakhulu uma kuqhathaniswa ne-SiC ejwayelekile yokuboshwa. Ngaphansi kwamandla kagesi wokuqamba, okukhona ngokusebenzisa isiboshwa sokukhuphuka kuphela ...
6kV polymer umbani arrester
I-6kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jikelele I-Zinc Oxide Type Surge Arrester iyisivikeli sakamuva esithuthukile esingaphezulu kwe- － voltage somugqa wokusabalalisa nedivayisi yesiteshi samandla. Ihlanganiswe ne-zinc oxide kanye nenye i-oxide yensimbi njenge-disc Resistor eyinhloko, izici ze-volt-ampere kanye namandla wamanje we-Resistor discare athuthuke kakhulu uma kuqhathaniswa ne-SiC ejwayelekile yokuboshwa. Ngaphansi kwamandla kagesi wokuqamba, okukhona ngokusebenzisa isiboshwa sokukhuphuka kuphela ...
10kV polymer umbani arrester
I-10kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jikelele I-Zinc Oxide Type Surge Arrester iyisivikeli sakamuva esithuthukile esingaphezulu kwe- － voltage somugqa wokusabalalisa nedivayisi yesiteshi samandla. Ihlanganiswe ne-zinc oxide kanye nenye i-oxide yensimbi njenge-disc Resistor eyinhloko, izici ze-volt-ampere kanye namandla wamanje we-Resistor discare athuthuke kakhulu uma kuqhathaniswa ne-SiC ejwayelekile yokuboshwa. Ngaphansi kwamandla kagesi wokuqamba, okukhona ngokusebenzisa isiboshwa esikhulayo kuvuliwe ...
3kV polymer umbani arrester
I-3kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jikelele I-Zinc Oxide Type Surge Arrester iyisivikeli sakamuva esithuthukile esingaphezulu kwe- － voltage somugqa wokusabalalisa nedivayisi yesiteshi samandla. Ihlanganiswe ne-zinc oxide kanye nenye i-oxide yensimbi njenge-disc Resistor eyinhloko, izici ze-volt-ampere kanye namandla wamanje we-Resistor discare athuthuke kakhulu uma kuqhathaniswa ne-SiC ejwayelekile yokuboshwa. Ngaphansi kwamandla kagesi wokuqamba, okukhona ngokusebenzisa isiboshwa esikhulayo kuphela ...
Ngaphezulu kwenkomba yenkomba
Okujwayelekile: I-SJWL-SGFI / II isibonisi esibili-in-one sifinyelelwe egatsheni lesifunda lokusatshalaliswa komhlaba ukwehluleka kaningi ukuthola umugqa wephutha yinto yokulungisa ikhanda labasebenzi bamandla kagesi ukuthola iphutha lomhlabathi kwesinye isikhathi isigamu sosuku, abanye kusukela ekuseni ukuthola ubusuku, i-Inner Mongolia kufanele ithole izinsuku ezimbalwa. Ngakho-ke, ukufakwa kwezinkomba zamaphutha kungakuthuthukisa kakhulu ukuthembeka kokuphakelwa kwamandla, kunciphise ukuqina kwabasebenzi, kunciphise isikhathi sokuphela kukagesi. Izici zomkhiqizo: Sho ...
Iphaneli yohlobo Inkomba Inkomba
Okujwayelekile: Inzwa yamanje yesikhashana esifushane kanye nenzwa yamanje yomhlaba zixhunywe ngokulandelana nomzimba oyinhloko wethuluzi lepaneli nge-fiber optical. Ngemuva kokwehluleka. inzwa idlulisa isignali kumsingathi we-mainframe yephaneli nge-fiber optical ukwahlulela. Isikhundla Sokufaka: • Kufakwe esitolo esiseduze sokuqala sentambo ende): kungahlulelwa ukuthi kunephutha esiteshini noma ngaphandle komugqa; • Kufakwe kumsebenzisi ku-transformer i ...
qapha umbophi wombani
i-arrester monitor isetshenziselwa ukurekhoda inombolo yesenzo somuntu oboshiwe kanye nesikhathi samanje sokuvuza.